Liverpool oo ka wal walsan bisha RAMADAAN haddii ay u soo baxdo Final-ka Champions League – Gool FM
Liverpool oo ka wal walsan bisha RAMADAAN haddii ay u soo baxdo Final-ka Champions League
(Liverpool) 27 Abriil 2018 Kooxda Liverpool waxaa u soo hoyday wal wal cusub haddii kooxdu ay xaqiijiso u soo bixida Final-ka Champions League.
Kulanka Final-ka Champions League ayaa ku aadaya 10-ka bisha Ramadaan qiyaas ahaan maadaama la filayo in ramadaan uu bilowdo 16-ka bisha May.
Final-ka Champions league ayaa la qorsheeyay in la ciyaaro 26-ka bisha May taas oo wal wal u ah Liverpool maadaama ay ka baqayaan in Salah uu tabar yareeyo kulanka Final-ka sida ay baahisay EuroSport.
Inkasta oo qofka muslimka ah uu xoog ka qaado Ramadaanka ayeey hadana kooxda Liverpool cabsi ka qabtaa xaalada Salah maadaama laacibku uusan wax cunto ah cunayn isla markaana uusan waxba cabayn saacado badan oo maalintii ah.
Mohamed Salah ayaa qaab ciyaareed fiican ku qaadanaya Liverpool, isaga ayaana calanka u haaya Reds xiliciyaareed kaan.
Messi iyo Suarez ka ma soo qayb galin sagootintii Andres Iniesta ee galabta iyo sababta oo la ogaaday